နိုငျငံတူ ကစားသမားတှဖွေဈကွတဲ့ အာမကျဒိုငျယာလို ထရာအိုရေးနဲ့ ဘိုငျလီဟာ မနျခကျြစတာမှာ အတှဲညီတဲ့ မိတျဆှတှေဖွေဈလာတော့မလား…? – Premier League Special
ဒဏျရာပွဿနာတှကေနေ ရုနျးထှကျနိုငျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ပရီမီးယားလိဂျပှဲတှမှော ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့တဲ့ အဲရဈဘိုငျလီဟာ အသငျးကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ ၃၆ သနျးနဲ့ရောကျရှိလာတဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမား အာမကျဒိုငျယာလို ထရာအိုရေးကို မနျခကျြစတာမှာ မွနျမွနျနသေားကအြောငျ ကူညီပေးသှားမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
နိုငျငံတူ ကစားသမားတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ အသငျးမှာ ခဈြခငျသူတှမြေားတဲ့ ဘိုငျလီရဲ့ အကူအညီ ရမှာဖွဈတာကွောငျ့ ထရာအိုရေး ရဲ့ မနျခကျြစတာနရေ့ကျတှကေတော့ အခကျအခဲရှိနမှောမဟုတျတော့ပါဘူး။
အာမကျကလညျး အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ဘိုငျလီဟာသူစံထားရတဲ့ကစားသမားတှထေဲကတဈဦးဖွဈတယျလို့ ပွောဆိုထားသလို ပေါ့ဂျဘာကိုလညျး လေးစားအားကသြူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဘိုငျလီက သူ့နဲ့ တဈနိုငျငံတညျးသားဖွဈတဲ့ ဒိုငျယာလိုဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အနာဂတျမှာ အောငျမွငျမှု ကွီးကွီးမားမားရရှိနိုငျမယျ့ သူဖွဈတယျလို့လညျး ပွောကွားသှားခဲ့ပွီး အသကျငယျရှယျတဲ့သူဖွဈနတောကွောငျ့ စိတျရှညျ၊သညျးခံမှုရှိဖို့နဲ့ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှကေို ခံနိုငျရညျရှိဖို့လိုကွောငျးလညျး ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
သူက “အာမကျ အကွောငျး ကြှနျတျော ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။ သူနဲ့လညျး စကားပွောဖူးပါတယျ။ သူက ငယျရှယျပွီး ပါရမီရှိတဲ့ လူငယျကစားသမားတဈယောကျပါပဲ။ ကစားသမားတဈယောကျအနနေဲ့ အသငျးသဈကိုရောကျရငျ အသငျးနဲ့ လိုကျလြောညီထှဖွေဈဖို့က အရေးကွီးတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့သိထားပါတယျ။
သူ့ကို အသငျးမှာ အထိုငျကအြောငျ ဝိုငျးဝနျးကူညီကွဖို့ လိုပါတယျ။ သူက အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျမယျလို့ ထငျပါတယျ။” လို့ ယူနိုကျတကျဗဟိုခံစဈမှူးက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတျောက သူ့ကိုကူညီဖို့ အဆငျသငျ့ပါပဲ။ သူမှ မဟုတျပါဘူး တဈသငျးလုံးက ကစားသမားတှကေို ကြှနျတျော ကူညီမှာပါ။ ကြှနျတျော ယူနိုကျတကျကို ရောကျခါစတုနျးကလညျး အသငျးမှာ ရှနျးနီ၊ ဇလာတနျနဲ့ ဗလနျစီယာတို့လိုမြိုး အတှအေ့ကွုံရငျ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို အသငျးနဲ့မွနျမွနျဆနျဆနျ အထိုငျကအြောငျ ကူညီပေးခဲ့ကွပါတယျ။”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာ အာမကျဟာ မနျခကျြစတာမွို့ကိုရောကျရှိနပွေီဖွဈသလို သူဟာ ယခုရာသီကုနျဆုံးခြိနျအထိ ကြောနံပါတျ ၁၉ ဂြာစီ ဝတျဆငျကစားမယျလို့ ယူနိုကျတကျအသငျးက အတညျပွုလိုကျပါတယျ။
ဒီကြောနံပါတျဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ အဆိုးအကောငျးရောနပွေီး နဈကီဘတျ၊ ဒှိုကျယော့ချတို့လို အသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျတှေ ဝတျဆငျခဲ့ဖူးသလို မားကပျရကျဖို့ဒျလညျး (၂၀၁၆-၂၀၁၈)အထိ နှဈရာသီဝတျဆငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အသငျးရဲ့ သမိုငျးမှာ အဆိုးရှားဆုံးကစားသမားတှဖွေဈကွတဲ့ ဂိုးသမား ရီကာဒိုနဲ့ ကှငျးလယျလူ ဂမျြဘာဂမျြဘာတုိ့လညျးဝတျဆငျဖူးတဲ့မှတျတမျးတှရှေိပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ ၁၉ပိုငျရှငျဖွဈသှားတဲ့ အာမကျ ကလညျး အငျစတာဂရမျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးက သူ့ကိုကွိုဆိုတဲ့ ပိုဈမှာ မားကပျရကျဖို့ဒျ ကို tag တှဲပွီး နှုတျဆကျခဲ့သလို ရကျဖို့ဒျကလညျး “ကံကောငျးခွငျးတှအေမြားကွီး သယျဆောငျလာနိုငျပါစေ ညီလေးရေ၊ မကွာခငျတှကွေ့တာပေါ့ဆိုပွီး” တုနျ့ပွနျရေးသားပွီးကွိုဆိုခဲ့ပါတယျ။
နိုင်ငံတူ ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ အာမက်ဒိုင်ယာလို ထရာအိုရေးနဲ့ ဘိုင်လီဟာ မန်ချက်စတာမှာ အတွဲညီတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတော့မလား…?
ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အဲရစ်ဘိုင်လီဟာ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၆ သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား အာမက်ဒိုင်ယာလို ထရာအိုရေးကို မန်ချက်စတာမှာ မြန်မြန်နေသားကျအောင် ကူညီပေးသွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတူ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အသင်းမှာ ချစ်ခင်သူတွေများတဲ့ ဘိုင်လီရဲ့ အကူအညီ ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ထရာအိုရေး ရဲ့ မန်ချက်စတာနေ့ရက်တွေကတော့ အခက်အခဲရှိနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အာမက်ကလည်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဘိုင်လီဟာသူစံထားရတဲ့ကစားသမားတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုထားသလို ပေါ့ဂ်ဘာကိုလည်း လေးစားအားကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုင်လီက သူ့နဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းသားဖြစ်တဲ့ ဒိုင်ယာလိုဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမားရရှိနိုင်မယ့် သူဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောကြားသွားခဲ့ပြီး အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်နေတာကြောင့် စိတ်ရှည်၊သည်းခံမှုရှိဖို့နဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုကြောင်းလည်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ သူက “အာမက် အကြောင်း ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ သူနဲ့လည်း စကားပြောဖူးပါတယ်။ သူက ငယ်ရွယ်ပြီး ပါရမီရှိတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။ ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသင်းသစ်ကိုရောက်ရင် အသင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ သူ့ကို အသင်းမှာ အထိုင်ကျအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ လိုပါတယ်။ သူက အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။” လို့ ယူနိုက်တက်ဗဟိုခံစစ်မှူးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်က သူ့ကိုကူညီဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ သူမှ မဟုတ်ပါဘူး တစ်သင်းလုံးက ကစားသမားတွေကို ကျွန်တော် ကူညီမှာပါ။ ကျွန်တော် ယူနိုက်တက်ကို ရောက်ခါစတုန်းကလည်း အသင်းမှာ ရွန်းနီ၊ ဇလာတန်နဲ့ ဗလန်စီယာတို့လိုမျိုး အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ ကစားသမားတွေက ကျွန်တော့်ကို အသင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် အထိုင်ကျအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ အာမက်ဟာ မန်ချက်စတာမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သလို သူဟာ ယခုရာသီကုန်ဆုံးချိန်အထိ ကျောနံပါတ် ၁၉ ဂျာစီ ဝတ်ဆင်ကစားမယ်လို့ ယူနိုက်တက်အသင်းက အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကျောနံပါတ်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ အဆိုးအကောင်းရောနေပြီး နစ်ကီဘတ်၊ ဒွိုက်ယော့ခ်တို့လို အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်တွေ ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးသလို မားကပ်ရက်ဖို့ဒ်လည်း (၂၀၁၆-၂၀၁၈)အထိ နှစ်ရာသီဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဂိုးသမား ရီကာဒိုနဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဂျမ်ဘာဂျမ်ဘာတုိ့လည်းဝတ်ဆင်ဖူးတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။
အခုအချိန်မှာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ် ၁၉ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ အာမက် ကလည်း အင်စတာဂရမ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းက သူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့ ပိုစ်မှာ မားကပ်ရက်ဖို့ဒ် ကို tag တွဲပြီး နှုတ်ဆက်ခဲ့သလို ရက်ဖို့ဒ်ကလည်း “ကံကောင်းခြင်းတွေအများကြီး သယ်ဆောင်လာနိုင်ပါစေ ညီလေးရေ၊ မကြာခင်တွေ့ကြတာပေါ့ဆိုပြီး” တုန့်ပြန်ရေးသားပြီးကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။